Ukusungula izwe lapho umuntu angakwazi khona okungokwakhe kudinga isisekelo sokwethemba ekulindeleni okuqhubekayo kokuziphatha kombungazi kanye nezivakashi. Sisungule lezi Zindinganiso Zomphakathi ukusiza ukuqondisa ukuziphatha futhi uhlele izindinganiso ezisekela umphakathi wethu womhlaba wonke.
Leli dokhumenti eliphilayo, njengoba sihlale silungisa indlela yethu yokuhlangabezana nezidingo zomphakathi wethu. Kodwa le migomo eminhlanu—ukuphepha, ukulondeka, ubulungiswa, ubuqiniso, nokuthembeka—ihlala iyinsika ephambili emizamweni yethu yokusiza siqinisekise ukuphepha nokukhukhuthaza ukuzizwa usekhaya. Sisebenza njalo ukuze siqiniseke ukuthi iyagcinwa futhi iyaqiniswa.
Okokuzithokozisa kwakho kwaka-Airbnb kuqala lapho wamukela okwenziwayo. Lokhu kungenzeka kuphela uma wethemba lo mphakathi futhi uzizwa uphephile. Ngenxa yalokho, sidinga ukuthi ugweme ukubeka engozini noma ukusongela noma ubani.
Ukuzilimaza noma ukulimaza abanye
Akufanele uhlukumeze ngokomzimba noma ngokocansi, ukuxhashazwa ngokocansi, ukuhlushwa ngokocansi, ubudlova basekhaya, ukuphanga, ukushushumbisa abantu, ezinye izenzo zobudlova, noma ukubamba noma ubani ngokumelene nentando yakhe. Amalungu ezinhlangano eziyingozi, kuhlanganise namaphekula, ubugebengu obuhleliwe, nokucwasa ngobudlova kwamaqembu, akuvunyelwe kulo mphakathi. I-Airbnb izibophezele ekusebenzeni ngokubambisana nabomthetho uma kufanelekile futhi iphendule izicelo ezigunyaziwe zokuphoqelela umthetho.
Sikuthatha njengento ebucayi ngempela ukuzibulala, ukuzilimaza, izifo zezinkinga zokudla, nokusebenzisa kabi izidakamizwa futhi sisebenzela ukusiza abantu abakule nkinga.
Ukusongela noma ubani
Akufanele ubonise inhloso yokulimaza noma ubani ngamagama akho noma ngezenzo. Siphinde sithathe izinsongo zokuzilimaza nezenzo njengento embi kakhulu futhi singase singenele uma siqaphela lolo songo.
Ukudala izimo ezinobungozi
Akufanele ugcine izikhali ezingalondekile, izingozi zesifo, noma izilwane eziyingozi endlini yakho, futhi akufanele wenze izimo ezandisa amathuba okusha noma uvimbele ukubaleka uma kwenzeka kuvela izimo eziphuthumayo.
Amalungu omphakathi wethu we-Airbnb abelana ngamakhaya, izindawo ezizungeze amadolobha amakhulu, nokokuzithokozisa. Kungakhathaliseki ukuthi uvula ikhaya lakho njengombungazi noma ubhekene nokwamukelwa isivakashi njengesivakashi, kufanele uthembe ukuthi uzozizwa uvikelekile. Sikucela ukuthi uhloniphe impahla yabanye, imniningwane, kanye nezinto zabo.
Ukweba, ukucekela phansi impahla, noma ukuphanga
Akufanele uthathe impahla engeyona eyakho, usebenzise impahla yomunye umuntu ngaphandle kwemvume yakhe, ukukopisha okhiye babanye noma amadokhumenti kamazisi, ukulimaza impahla yabanye, ukuhlala endlini ngemva kokuphela kwesikhathi sokuhlala, noma usongela noma ubani onokulinganisa okubi noma enye inhlawulo noma ukulimala ukuze uthole isinxephezelo noma ezinye izinzuzo.
Iyini Inqubomgomo Yokuphanga ye-Airbnb?
I-spam, i-phishing, noma ukukhwabanisa
Awufanele wenze ukuthengiselana ngaphandle kwesistimu yokukhokha ye-Airbnb; zibophe ukukhwabanisa ukubhukha, ukukhwabanisa kwekhadi lokukweleta, noma ukushushumbisa imali; uzama ukuyisa ithrafikhi kwamanye amasayithi noma imikhiqizo engahlobene nemakethe; ukuguqula izinkokhelo eyenzelwe abanye; ukuhlukumeza isistimu yethu yabaxoxelwe; noma ukuqamba amanga ngamanye amalungu omphakathi.
Ukuhlukumeza ubumfihlo yabanye noma amalungelo omnikazi okusungula
Akufanele upopole abanye abantu; Amakhamera awavunyelwe endlini yakho ngaphandle kokuba adaluliwe phambilini futhi ayabonakala, futhi avunyelwe ezindaweni ezizimele (njengezindlu zokugeza noma izindawo zokulala). Akufanele ufinyelele kuma-akhawunti abanye ngaphandle kokugunyazwa noma wephule ubumfihlo babaye, amalungelo okukopisha noma izimpawu zokuthengisa.
Umphakathi we-Airbnb womhlaba wonke uhlukile, ingqayizivele, futhi ivuselelekile njengezwe elisizungezile. Ubulungiswa yilokho okusihlangene ndawonye, okwenza sikwazi ukuthembana, sihlangane kahle nomphakathi, futhi sizizwe sengathi sisekhaya ngempela.
Ukuziphatha okubandlululayo noma inkulumo enenzondo
Kumele uphathe wonke umuntu ngenhlonipho kukho konke ukuxhumana kwenu. Ngakho-ke, kufanele ulandele yonke imithetho esebenzayo futhi ungaphathi abanye ngendlela ehlukile ngenxa yohlanga, ubuzwe, imvelaphi yabo ezweni, inkolo abakuyo, abantu abakhetha ukuthandana nabo, ubulili, ukuthi bazibona bona bebulili buni, ukukhubazeka, noma izifo ezimbi. Ngokufanayo, ukuhlambalaza abanye ngenxa yalokhu osekubaliwe lapha ngenhla akuvumelekile.
Iyini Inqubomgomo Yokungabandlululwa ye-Airbnb?
Ukuxhashazwa noma ukuhlukumeza abanye
Akufanele ukwabelana ngolwazi lomuntu ukuze uhlaze noma ukukhokhisa ngokuvala umlomo kwabanye, ukuqonda abanye ngokuziphatha okungafuneki, ukuhlambalaza abanye, noma ukwephula izindinganiso zethu zokuhlola nokuqukethwe.
Ukuphazamisa umphakathi ozungezile
Akumele uphazamise izindawo ezisetshenziswa nguwonke wonke, wenze omakhelwane "abasebenzi abemukela izivakashi," wenze into ebangela isicefe abanye abantu, noma wehluleke kaningi ukulungisa lapho omakhelwane nomphakathi beveza ukukhathazeka okuthile.
Okokuzithokozisa kwakho kwe-Airbnb kufanele igcwale izikhathi ezijabulisayo nezindlela ezimangalisayo. Njengoba umphakathi wethu wakhelwe kukuthemba, ubuqiniso bubalulekile—kudinga ukulinganisela kokulindelwe okwabiwe, ukusebenzisana okuqotho, kanye nemininingwane enembile.
Ukuzichaza ngendlela okungeyona
Akufanele unikeze igama elingamanga noma usuku lokuzalwa, usebenzise uhlu lwezinhloso zezohwebo ngaphandle kwemvume yomphathi wakho, unemicimbi noma amaqembu ngaphandle kokuvunyelwa komphathi wakho, ugcine ama-akhawunti aphindaphindiwe, noma usungule i-akhawunti uma ungaphansi kweminyaka engu-18.
Ukuchaza izindawo zakho ngendlela engeyona
Akufanele unikeze ulwazi olungalungile ngendawo, ukutholakala okungalungile, ukudukisa abantu mayelana nohlobo, isimo, noma imininingwane ngendlu yakho, ufake enye indlu esikhundleni senye, ukufaka indlu engamanga noma ngokukhohlisa, ushiye imibono ewukukhohlisa, ube yingxenye yokubekwa kwamanani adukisayo, noma wehluleke ukudalula izingozi kanye nezinkinga zokuhlala.
Okokuzithokozia okuwukuthengiselana kuphela
I-Airbnb yaqala njengendlela yokuvumela abantu ukuba bahlalisane emakhaya abo. Nakuba i-Airbnb isikhulile kusukela ezinsukwini zokuqala, futhi nokuhlalisana emakhaya abo sekwande umhlaba jikelele, sisalindele ukuthi indlu ngayinye kungabi kuphela yokwenza ibhizinisi kodwa ibe yindawo ekwazi ukuhlalisa abanye abantu.
Konke okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuhlukile futhi kuqondene nalelo khaya, nendawo enumakhelwane kanye nombungazi. Njengoba umphakathi wethu wenza izibophezelo ngokusekelwe kule mininingwane, kufanele sikwazi ukwethembana nokuthi nabanye singabethemba—kungakhathaliseki ukuthi kulapho sikhulumisana ngesikhathi, isimo sekhaya, noma kulokho okulindelwe esikubekile.
Ukuhlalisa abantu ezindaweni ezingakulungele ukuhlala abantu
Akufanele unikeze izindawo ezinokuhlanzeka okungekho ezingeni noma ukungadaluli ukungabi khona kwamanzi agelezayo noma ugesi. Akufanele unikeze izindawo ezingezona zokulala ezisemthethweni (isib. impahla yokukhempa), engahlali ndawonye isikhathi sokuhlala (isib. ukuhamba ngezikebhe), noma ukungabi nokufinyelela ezindaweni zokuphumula (isib. ukuqondisa izivakashi ukuba zisebenzise izindlu zokugezela zomphakathi).
Uma zingekho izimo ezingalindelekile, akufanele ukhansele ngemva kokubekwa kwesikhathi esinqunyiwe kunqubomgomo yokukhansela efanele. Akufanele futhi wehluleke ukwenza ukungena kwenzeke, wehluleke ukukhokha, noma wephule imithetho yekhaya lombungazi.
Akufanele ube namaphuzu aphansi njalo, ube umuntu ongaphenduli ngesikhathi sokubhukha noma phakathi naso sonke isikhathi sokuhlala kwezivakashi, wehluleke ukunikeza indllela eyanele yokuxhumana nawe njengombungazi, noma wenqabe ukubamba iqhaza ohlelweni lwethu lokuxazulula